SIDA LOO SAMEEYO GEED LEH GACMAHAAGA. QORYAHA DABIICIGA AH EE GURIGA KU JIRA - SAMEE NAFTAADA
Haddii aad rabto inaad ku guuleysatid jilidaad iyo sharaf jimicsi ka samaysan waxyaabo alwaax ah oo ku yaal gudahaaga, waa inaad da'daada ku jirtaa. Iyo si aad si fudud guriga ugu sameyso, adigoo dooranaya habka ugu wanaagsan. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa hababka caanka ah ee gabowga iyo waxyaalaha farsamadoodaba.
Waa maxay sababta alwaax gabay ah?
Si caadi ah ayuu u dhawaaqaa, laakiin gudaha gudahiisu waa geed aad u qurux badan, oo ka soo horjeeda gaboobay.
Waxaad sameyn kartaa laydhka asalka ah, istaaga, dharka, miiska, gardarrada, guluubka albaabada, albaabada, sagxadaha ama dukaanka beerta laga soo qaato waxyaabahaas. Wax kasta oo sheyga ah ayaa ku faafi doona raaxada iyo diirimaadka. Intaa waxaa dheer, maanta wax kasta waa mid gaboobay.
Ma taqaanaa? On adduunka, waxaa jira in ka badan daraasado geedo daraasad ah, taas oo ay adag tahay u siman birta. Dhaqdhaqaaqooda lama dhaqaajin karo oo biyo ku daadin. Xitaa waxaa loo isticmaalaa injineernimada farsamooyinka loogu talagalay soo saarida walxaha dhismaha iyo ciddiyaha. Kuwani waa mawduuca, caleemaha, yew, azobe, cirridka Schmidt, ulin, jioba, sucupira.
Haddii aad sugto illaa inta geedi socodka dabiiciga ah uu dhacayo, waxay qaadan doontaa waqti dheer. Muddo sanadood ah, waa lagama maarmaan in qaabka dabiiciga ah ee maaddada hoos yimaada qorraxda iyo dabayshu ay helayaan isdhexgal gaar ah ee mugdi iyo madow. Xaqiiqdii, xilliga qaboobaha cayayaanka cufan, kuwaas oo ah qalfoof, ayaa sii kordhaya. Xilliga xagaaga, dhar jilicsan oo iftiin leh ayaa la sameeyaa. Waxay ahayd iyada oo tirtirtay wakhti ka dib, kaas oo siinaya guddiga oo leh taariikhda hore.
Saameyntan waxaa si guul leh loo isticmaalaa naqshadeeyayaasha hadda jira, sidaas oo kale xitaa walxaha alwaaxda ugu raqiisan waxay u dhigmaan sifooyinka raaxada iyo qaabka. Haddii aadan lahayn, ma abuuri kartid noocyo dalka ah, Provence, retro, chebbi-chic, canqowga.
Intaa waxaa dheer, alaabta la soo iibsado alaabta dabiiciga ah waxay u adeegi doontaa wax ka yar tan cusub, laakiin dabeecad qallafsan.
Provence, Chebbi Chic iyo Vintage Design
Noocyo badan oo caan ah oo naqshad casri ah ayaa lagu gartaa isticmaalka qalabka la gashado iyo kuwa la jajabiyey iyo faahfaahinta gudaha gudaha, tonal taarikhiga ah iyo walxaha jacaylka ee qurxinta.
Ma taqaanaa? Sannad kasta baahidooda, dadku waxay yareeyeen ilaa 15 bilyan oo geed oo ka mid ah sanduuqa cagaaran ee adduunka, iyada oo isla markaana lagu daray 5 bilyan oo cusub oo cusub.
Habkani wuxuu markii ugu horreysay ka hadlayaa qarnigii sagaalaad ee Faransiiska ku noolaa gobolka oo isku mid ah. Dhaqankooda kudhaqaaqa dhibaatooyinka nolol maalmeedka ah iyo dabeecadda koonfureed ayaa aasaas u ah horumarinta jihada cusub ee qaabeynta.
Guryaha Provencal waxay ku kala duwan yihiin xajmigooda iyo siminaarka siman, habdhaqanka qaddarinta waxyaalaha ay awoowayaashoodu yihiin. Kuwani waxay noqdeen kuwa shakhsiyaadka koonfurta France. Habkani wuxuu caan ku yahay:
farqiga caddaanka ah iyo dhammaan hooska dharka;
jajabyada qorraxda qorraxda qallafsan;
muraayad farshaxan leh oo lagu qurxiyo qurxiyo, qalab (inta badan waxaa jira sawirro ubax ah, faashad, xoolo dhaqato iyo unug);
walxo badan oo qoryo ah ee qurxinta;
Nadaafad ku xirnaanta foornada dhoobada (dhagxan, dhagax qashin, lebbiska, qowmiyadda);
chinaware, muraayadaha muraayadaha fiiqan, dharka jilicsan iyo miisaska dharka;
nalalka iftiinka leh ee waxyaallaha kala-soocidda, suufka iyo ubaxa;
daaqado dusha sare leh oo xiran;
qalabka rustic ee foomamka asalka ah oo leh walxaha qoryaha, dhirbaaxo iyo walxaha.
Ma taqaanaa? Geedka ugu dheer adduunka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay isku xigxiga California. Geedkeeda ayaa kor u kacay ilaa 115 mitir, dhererkeeduna wuxuu gaadhay 8 mitir.
Waa jihada cusub ee qaabeynta gudaha. Wuxuu ka soo jeedaa UK muddo 30 sano ka hor.
Saldhigeedu wuxuu yahay xakamaynta, xagjirnimada, murtida ku jirta Ingiriisiga, iyo cidhibnaanta waxkasta oo waayeel ah laakiin wanaagsan. Habka shebbi-chic ayaa lagu muujiyey sifooyinka soo socda:
maqnaanshaha codadka cad;
Muuqaalka soodhada cagaarka ah: buluug, casaan, qandho, jaalle iyo caano;
midabyo cad oo kala duwan;
Isticmaalka foornooyinka dhoobada ah ee looxa dhoobo, xayawaanka duurjoogta ah ama mashiinka, iyo weliba qaabka ubaxa yar;
on a saqafka cad cad, xajmiga caadiga ah si ay u dhigmaan caleen dahab ah, iyo sidoo kale jajab ah cufan ee saqafka;
samaynta alwaax gaboobay iyo walxo bir ah;
qalabka gudaha ee la isticmaalo ayaa badanaa lagu soo celiyaa wixii qadiimooyin ah, dhar bir ah, farshaxan sawir leh, shumacyo qadiim ah, ubaxyo cusub, foorno foorno iyo malaa'igta malaa'igta;
iftiinka waxaa ka jira qaali, dhar, muraayad iyo muraayado qadiimi ah;
alaabta la cusboonaysiiyay oo ka samaysan alaabo qaali ah
Ma taqaanaa? Wadankan Maraykanka, dhammaan dharka lagu sameeyey ka hor 1830 waxaa lagu qeexay sidii antiquities, Kanada - ilaa 1847, iyo Boqortooyada Ingiriiska - ilaa 1917.
Waxaa la abuuray Faransiiska, isagoo aasaasay asaaska midnimada iyo hoosta asalka ah ee alaabooyinka gudaha ee duugoobay.
Ugu horreyntii, tani waxay ahayd magaca khamriga leh mudaharaad muddo dheer ah, laakiin wakhti ka dib ayaa la sameeyay qaab-naqshadeeye oo dhan.
Muuqaalkiisa ugu muhiimsan waa isticmaalka antiques, waa in ay si sax ah u dhigtaan isbedelka moodada xilligooda. Vintage gudaha gaarka u ah:
Meelaha cad, dhajiska iyo midhaha cagaarka leh, iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda waa burgundy, cagaar, garaaf, dhar guduudan;
sawirro leh ubax iyo dhir;
daboolka laga sameeyey alwaax, marble ama ceramics, laakiin had iyo jeer leh saamaynta dharka;
may dhaafin ee qurxinta (quruxda kaliya ee qaaliga ah, sawirrada, muraayadaha, rinjiyeynta, shumaca ayaa la isticmaalaa);
stucco qaabka caadiga ah;
Isticmaalka alaabta dabiiciga ah, alaab khafiif ah, kareem, jilbaha, dhogorta;
soo bandhigid gudaha gudaha ee xakamaynta iyo xarrago;
alaabta ka soo horjeeda alaabta ka samaysan alwaax iyo bir bir ah.
Waa muhiim! Gaboobaha sunta ah, geedaha qiiqa ka soo baxa noocyada geedaha soo socda ayaa lagu talinayaa: geed, dhir, lood, ash, larch, walnut, silsilad, dusyo, methobo, kempas, merbau. Guddiga waxaa laga yaabaa in uu leeyahay buro iyo cillado kale - tani xitaa waa u wanaagsan tahay.
Talo-tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan gabowga qoryaha
Xirfadaha casriga casriga ah waxay muddo dheer ka faa'iideysteen qaabab badan oo ah sunta macmalka. Mid kasta oo ka mid ah ayaa leh faa'iido iyo kala duwanaansho. Soo ogow kuwa kuwaas.
Nidaamka farsamada casriga ah ee qadiimka ah waxaa loo fuliyaa siyaabo dhowr ah iyadoo lagu daaweynayo qoryo leh burush adag ama adoo adeegsanaya rinji laba-lakab. Nabar adag oo cad cad
Sidoo kale akhri sida loo sameeyo barxadda beerta, jidadka beerta iyo xajmiga leh gacmahaaga ka soo qoryo.
Doorashada koowaad waxaa la yiraahdaa buraash, iyo labaad - patina.
Nuxurka habka uu ka kooban yahay soo saaridda jilicyada qoraxda jilicsan, taas oo ka dhalatay taas oo ah mid si cad loo qeexay dusha sare ee guddiga. Isla arrimahan ayaa dhacaya dabeecadda kadib tobanaan sano.
Video: sida loo gooyo geed - buraash Khabiiradu waxay tixgeliyaan in ay cadayan habka ugu fudud, laakiin waxay ku baaqayaan habab mas'uul ka ah doorashada xaabada. Tani waxay u fiicantahay inaad isticmaasho dhererka oo leh qaab cad.
Qoryaha waaweyn waxaa ka mid ah: yew, pseudo-loose, larch, qoryaha iyo geed.
Dhab ahaan ma aha mid ku habboon:
geedo midho leh (cherry, pear, tufaax);
Waa muhiim! Markaad la shaqeyneysid qoryaha, ha ilaawin in aad wejigaaga iyo indhahaaga ilaaliso adoo adeegsanaya maaskaro ama muraayad laga soo saaro boodbood, boodh. Ha dhexgalin sidoo kale neeflayda.
Marka doorashada xulashada, waxaad heli kartaa shaqo.
Masters-to-masters waxay ku talinayaan marka hore inay ku dhaqmaan marin kasta oo aan loo baahnayn si ay "u buuxiyaan" gacanta:
Qaado gaas gubasho iyo horey u sii wadi alaabta. Ha lumin heysashada: gubi alaabta adigoon dib u dhigin qalabka muddo dheer. Ha u ogolaanin tar in uu gubayo.
Xaaladda marka aysan jirin hababka kuleylka ah, kahor shaqada, hubso inaad guddiga ku nadiifiso burush qoyan oo u daa qiyaastii 3 daqiiqo.
Ku dheji buraash bir leh maro gaar ah Mashiinka ama matoorka korontada oo ka dhaqaaq hal dhinac oo ka mid ah guddiga ilaa dhinaca kale ee jihada fiilooyinka, sidaas oo ay ka saareen jilicsan jilicsan. Waxaa muhiim ah in arintaan lagu sameeyo hal taabasho, ma aha jerks.
Si fiican u daaqi dusha sare ee xaashida xaashida xaashida caarada leh.
Ka qaad boodhka nadiifiyaha ama nadiifiye alwaax jilicsan. Dhammaan dhaqdhaqaaqa waa in lagu hagaajiyaa fiilooyinka, ma aha mid guud ahaan.
Haddii la rabo, waxaad hagaajin kartaa sawirkaaga adoo ku maareynaya raadadka cayayaanka jilicsan. Tani waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu caawinayo dharka khafiifka ah. Dufanka geeska waa inuu ahaadaa boodh, laakiin waa la duubay.
Si aad u abuurto muuqaal buuxa, dabool daboolka rinjiga rinjiga ama rinjiga, dhoobo. Qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha ayaa ku talinaya habka hal-abuurka ah ee marxaladdan shaqo, isku-darka midabada iftiinka iyo madow Si kastaba ha noqotee, waa in loo qaybiyaa siday u kala horreeyaan ee niyadjabyada iyo diidmada.
Haddii midabka midabkiisu yahay mid la mid ah, u gudbi waraaqda xaydhka ah ee gargaarka si aad u gaarto dharka.
Ugu dambeyntii, gudida maamulka. Xirmooyinka dildilaaca waxay u egtahay mid aad u qosol badan, taas oo la helo ka dib marka la duubo rinjiyeyaasha gaarka ah iyo caanaha.
Waa muhiim! Marka aad iibsanayso qoryaha, tixgeliyaan kala soocidooda. Si loo abuuro saameyn la duugo, fasalka C wuxuu u habboon yahay, kaas oo lagu gartey tiro aan xadidnayn oo ah boogo (oo ay ka mid yihiin dillaac), dildilaacyo iyo ololeyaal. Haddii aadan jeclayn ruuxa qarniyadii hore, waxaad ku siin kartaa doorbidada boorsooyinka AB. Waxay leeyihiin cillado ka yar.
Marka patina waxaa loo yaqaannaa dufan khafiif ah oo ka sameysan waxyaabo naxaas ah. Maanta waa farsamo caan ah oo loo adeegsado habeynta biraha iyo alwaaxda labadaba.
Habkani waa mid xoog leh, inkastoo la sameeyo iyada oo la adeegsanayo reagyada gaarka ah. Hirgelintiisa waxay u baahan tahay saxsanaanta, dulqaadka iyo maqnaanshaha.
Haddii aadan waayo-aragnimo aheyn farsamooyinka la midka ah, waxaa lagugula talinayaa inaad ku dhaqanto qashinka qoryaha. Naqshadayaashu waxay jecel yihiin in ay codsadaan in ay kufilan yihiin markaad guri ka sameysanayso dalka iyo qaababka caadiga ah. Khubarada ayaa aaminsan in kala duwanaanta ugu fudud ee qulqulka noocan oo kale ah ee qashinka ah uu yahay qashinka cayayaanka ee galka dusha sare ee dusha sare, taas oo abuureysa saamaynta dharka. Waxaanu raaci doonaa adoo adeegsanaya patina.
Sidoo kale akhri sida loo samaysto kursi fadhiga ah oo ka soo baxa gacmahaaga.
Sidaas darteed, hoos ugu dhac shaqada:
Sanduuqa ciidda si taxadar leh u dusha sare ee dusha sare, ka saarida rinjiga hore sida ugu macquulsan.
Isticmaal burush jilicsan ama faaruq ah si aad uga qaadid boodhka.
Si kor loogu qaado sifooyinka dabacsan ee alwaaxda, waa muhiim (waxa muhiim ah in la doorto astaamaha dib u soo celinta) iyo qalajin.
Maalin maalmaha ka mid ah waxaad bilaabi kartaa codsiga patina. Tani waxay u fiicantahay in la helo rinji akrilik. Waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato daryeelka ugu dhow. Ka dib rinjiga, dusha sare waa inuu qallajiyaa 24 saacadood.
Ka dalbo jilicsanaanta rinji ee soo socota ee leh bareem ama hoos-qaraxa dhuxusha oo leh jihooyin walba oo leh istaroog yar. Waxaa muhiim ah inaysan ku dhaafin xadiga patina. Isla markiiba, iyada oo aan la siinin lakabka lagu buufiyo qallaji, xoqin xumbada xad-dhaafka ah oo leh xumbo.
Marka rinjiga uu bilaabo inuu qalalo, tirtir marin kasta oo leh maro qallalan, taas oo ku siin doonta saameynta hore.
Dhar gebi ahaanba. Tani waxay ku siin doontaa qaab-u-sameynta oo ay ka ilaaliso waxyeellada farsamada iyo qoyaanka xad-dhaafka ah.
Fiidiyaha: alaabta guriga oo dhejis ah
Waa muhiim! Xakamaynta looma adeegsanayo qaybo badanaa lala xiriiro qof. Rinjiga ayaa si deg deg ah looga tirtiray, taas oo saameynaysa niyadjab halkii uu ka noqon lahaa ruuxa qunyar-socodka ah.
Saameynta waayeelka waxaa lagu gaaraa habka adag ee qashinka. Farsamadan waxaa lagu fuliyaa dhowr marxaladood:
Ugu horreyn gubi dusha sare ee guddiga leh shidaalka gaas. Tallaabadani waxay gacan ka geysan doontaa nadiifinta jilicsanaanta jilicsan iyo muujinta qaabka, dildilaaca iyo buro.
Kadib, adoo isticmaalaya buraash bir ah, waa inaad ka saartaa ugxanta keentay. Waxay u egyihiin geed sidii ay u shaqeyn lahaayeen burush adag
Haddii aad rabto, waxaad xiri kartaa alwaax qoryo leh. Hal koollo ayaa ku filan si loo hagaajiyo saameynta la filayo.
Furan dusha sare leh dhoobo. Iyada oo ku xiran iliga maaddada iyo tayada qurxinta, waxaad dooran kartaa caanno aan midab lahayn ama midabyo midabo leh.
Ogow in isticmaalka blowtorch inta lagu jiro gabowga gabowga dhererka badanaa keeno in ay gubaan calaamadihii aan u fiicnayn in ay isdiyaariyaan..
Nidaamkani wuxuu u egyahay asalka asalka ah oo kaliya xayawaannada yaryar, maadaama ay jiraan fareeshooyin ka kooban halbeegtooda. Marka lala xiriiro reagoyada kiimikada, way madow yihiin, taas oo ay sabab u tahay saameyn sii xumaynaya.
Waa muhiim! Haddii ay jiraan calaamado fangas ah oo ku yaala qoryaha, khariidad gaar ah oo koloriin ah ayaa kaa caawin doonta inaad ka takhalusto dhibaatada. Ogsoonow inay u dhexeyso 3 cm qoto dheer oo ku jirta maaddada.
Tiknoolajiyada waxaa lagu gartaa fududeyn iyo jiritaanka kala duwanaansho kala duwan, kuwaas oo aad ku gaari karto heer aad u weyn ama ka yar da 'wayn.
U hubso inaad dusha sare kaga qorto warqad emery ah oo leh jajab weyn ka hor shaqada. Ka dibna doorta habka aad u dhadhaneysid:
U daryeeli guddiga si deeqsinimo leh ammonia. Dareemida maaddada, walaxda waxay keeni doontaa madow sharaf leh. Haddii aan ka hadlayno agagaarka degaanka qaarkood darbiga, waxaad u qeybin kartaa reaktitiga si aan caadi aheyn, taas oo kordhin doonta saameynta.
Isticmaal buraashka polymer, geedi socodka si aad u ogaatid siddeedda sanadlaha ah. Ka dibna ku dabool dharka lebbiska loona dhejiyo.
Rinjiga dusha sare leh rinjiga dhaldhalaalka oo qalalan. Qaybta la qalajiyey ayaa ku daboolan rinji labaad oo ah dareere badan. U ogolow in aad qallajisid oo aad geeddi-socodka qaybo ka mid ah qoryaha ku qorto maro xajin leh jajab qurxoon.
Geedka googo saaro biyo ku saleysan biyo. Ka dib markaa, qayb ahaan jooji dheriga ku yaala bartamaha dhexe, oo ka baxaya geesaha madow.
Waxaan ku talineynaa inaad akhrisid sida loo dhiso barkadda dabaasha, dharka, maqaarka iyo makhaayadaha, iyo sidoo kale sida loo sameeyo brazier, pergola, gebebo, qulqulo qallalan, biyo iyo dariiqo la taaban karo leh gacmahaaga.
Xitaa guriga, waxaad samayn kartaa jajab ah qurxinta iyo qurxinta dabiiciga ah, inkasta oo ay dhab ahaantii noqon doonaan kuwo cusub. Habkani, waa muhiim inaad muujiso qiyaasta ugu badan iyo dadaalka, ka dibna walxaha alwaaxdaadu way ka sii xumaan doonaan kuwa iibiya dukaamada qadiimiga ah.
Si aad u xoojiso qoraalka dhirta (meesha ay jirto wax aad ku xoojineyso), waxaad isticmaali kartaa farsamooyin dhawr ah. Qodobka: Qodobbada qoraalka ah, sawirka, sawiridda muuqaalka iyadoo la isticmaalayo foormis jilicsan iyo qayb adag oo adag. Isticmaalay oo laga heli karo hababka: Boodka; Burushka buraashka (inta badan biraha) ka dibna kaabaya (badiyaa caag); Burburinta waxaa ku xiga qayb ka mid ah qaybo guban oo leh burush jilicsan oo jilicsan. Tijaabinta waxaa loo isticmaali karaa noocyo kala duwan oo cufan, cirbadaha, lafdhabarta, saliida (macnaheedu waa in suufku ka soo baxo jilicsanaanta jilicsan sababtoo ah waxaa hoosta ka xariiqa calaamadaha muuqaalka ah, laakiin si loo gaaro saameyn soo noqnoqda ah, sida impregnation or staining, wax, saliidu waa gaaban yahay dhar kasta oo dhejis ah ayaa lagu samayn karaa daboolidda caadiga ah, haddii rinjiga ka dib, rinjiga riixaya waxoogaa yar, laakiin aan u oggolaaneynin inuu dhigo oo qalajiyo, ka saar lakabka dareeraha leh maro ama caag xumbo, halkaasoo la aqbali karo. chnuyu rinjiga loo gaaro waxtarka u xariiqaysa iyo texture daaha.
Isku day in aad qaadatid Booyad leh hagaajin oo weydii suuqa dhexdiisa (dukaanka) duub leh burush caag ah. Waxaa lagama maarmaan ah in aad si fudud u taabato (qoryaha jilicsan oo leh cadaadis xoog leh ayaa ka bixi doona dhismaha). Dhismaha, waayeelka waxaa loo yaqaan "bur bur".